IMashup Camp kuleli sonto eMountain View, CA | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJulayi 11, i-2006 NgoLwesibili, ngoJulayi 4, i-2017 Douglas Karr
Kuleli sonto, ngibuhlungu eceleni eceleni ngesikhathi seMashup Camp. Umsebenzi wami omusha wemisebenzi ungibuyisele emuva ku-Integration nokuningi ekuphathweni komkhiqizo. Ngonyaka odlule ngiye eMashup Camp yokuqala yaminyaka yonke futhi ngakha ubungane ngokushesha neqembu elinethalente labantu abakhe lolu hlelo. Eqinisweni, ngiwasingatha amawebhusayithi eMashup Camp futhi ngakha i-logo abayisebenzisayo kulo nyaka.
Ukuya kula makamu, umuntu uphefumulelwe ngokuphelele ubuhlakani nethalente lokuhweba eliqoqwe egumbini elilodwa. Laba ngabafana abacindezela ubuchwepheshe bube nemikhawulo yabo, bakha ukuhlanganiswa okumangalisa kakhulu phakathi kwezinsizakalo nezinhlelo zokusebenza kuzingxenyekazi ezahlukahlukene, izilimi, nezakhiwo. Amanye amademo owabonayo akuqotha nya.
Ukusebenzela i API umhlinzeki, bekujabulisa kakhulu ngoba wakhe izici ozisebenzisayo, kepha ungakaze ucabange ukuthi abantu bazofaka ubuchwepheshe bakho kwimikhiqizo abayenzile ngendlela abanayo.
Uma useMountain View, CA, kuleli sonto bese ukhansela umdlalo wakho wegalufu bese uya eMashup Camp. Kuyinto engaqondakali ezokushiya nemibono eyisigidi yokuthi ungayikhulisa kanjani iminikelo yakho yomkhiqizo. Ngibingelele uDavid Berlind ngami (lapho ethola ithuba lokuthola umoya wakhe!). UDavid ubambe iqhaza ekususeni lo mcimbi omkhulu futhi uneminwe yakhe kuMashup pulse.
Impela ngifisa ukuba lapho!
Tags: udavid berlindikamu le-mashupukubuka kwentaba
Ukubambisana Ngokubambisana ne-Google Spreadsheet